Ogaden News Agency (ONA) – Faraca Midnimo oo Shir abaabul ku qabtay xerada Qaxootiga ee Dhagaxlay+ Sawiro
Faraca Midnimo oo Shir abaabul ku qabtay xerada Qaxootiga ee Dhagaxlay+ Sawiro
Waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab ka qabsoomay shalay 30 Apr.2015 shir balaadhan oo ay kasoo qayb galeen inta badan xubnaha faraca midnimo ee ka howlgala xerada Dhagaxlay.
Dhirkan oo ay soo qabanqaabiyeen gudiga faraca midnimo ayaa ahaa shir abaabul ah oo loogu talagalay in kor looqaado howlaha halgan ee kasocda xerada Dhagaxlay iyo deegaanada kuxeeran.
Dhirkan oo ahaa shir aad ubalaadhan ayaa furmay abaarihii 2:30pm xiliga Dhadhaab waxaana furay Gudoomiyaha faraca Midnimo oo ugu horaynba soo qadimay qodabada ay gudigu ugu talagashay in maanta laga hadlo wuxuuna gudoomiyuhu kusoodhaweeyay hogaanka dhinaca diinta iyo dabagalka uqaabilsan Faraca oo wacdi aad umugwayn madasha kasoo jeediyay,
Intaas kadib waxaa laguda galay qodobadii shirka waxaana lagusoo dhaweeyay Xoghayaha Faraca oo soojeediyay warbixin aad uqiima badan oo dal iyo dibadba ah wuxuuna Hogaanku aad ugu dheeraaday wararkii ugu danbeeyay ee kayimid wadanka ogadenia iyo wararkii ugu danbeeyay ee jaaliyaadka dibada.
Sidoo kale waxaa lagusoo dhaweeyay Hogaanka Dhaqaalaha faraca oo si qota dheer ugawarbixiyay xaalada dhaqaale ee faraca isagoo bulshada kuguubaabiyay in ay labanlaabaan dhaqaalaha lagu xoraynayo ciida ogadenia si aan ugaadhno buuyidhi ujeedadeena.
Sidoo kale waxaa lagu soodhaweeyay gudoomiyaha Gudiga Garsoorka faraca oo khudbadgaaban kadib madasha kabixiyay shahaadooyin uu gudoonsiiyay xubno kasoo qalin jabiyay koorso Diini ah oo ay bixinayeen ururka culimada ee faraca Midnimo.
Intaas kadib waxaa lagudagalay qodobkii ugu mugwaynaa oo ahaa qodob abaabul ah waxayna gudigu qaab dood ahaan u dhaxdhigeen guud ahaan faraca waxaana sifiican loo lafa guray qodobkan oo ay xubna badan kadhiibteen fikirkooda waxaana hoosta laga xariiqay in guntiga dhiisha layskaga dhigo siloofuro geediga biyahana aan sacabadeena ugu cabno.
Guntii iyo gunaanadkii shirkii ayaa kusoo gabagaboobay sinabad ah oo waliba ay farxadi kujirto